Mogadishu Journal » 2018 » February » 14
Mjournal :-Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka waddanka Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ayaa ku geeriyooday waddanka Koonfur Afrika, sarkaal sare oo ka tirsan xisbigiisa MDC ayaa sidaasi sheegay. Mr Tsvangirai oo 65 sanno ku geeriyooday ayaa waxa uu horay Ra’iisul Wasaare...
Kulanka ugu wayn wareega 16ka kooxood ee UEFA Champions League ayaa caawa ka dhacaya garoonka Santiago Beranabeu iyada oo kooxaha Real Madrid iyo PSG ay geesaha isku darayaan. Kulankan ayaa si wayn loo sugayay tan iyo markii la sameeyay isku aadkii wareegan iyada oo labada...
Mjournal :-28-kii bishii November ee sanadkii tagay, dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ku saabsan hir-gelinta mashaariic horumarineed oo ay Qadar ka fulineyso Soomaaliya. Mashaariicdan oo ku kacaya 200 oo milyan oo doollar ayaa waxay...
MOGADISHU, Somalia, 13th February, 2018 — Mohammed Ahmed Othman, UAE Ambassador to Somalia, yesterday (Monday) met with Mohamed Abdi Hayir, Minister of Commerce and Industry of Somalia, at the UAE Embassy in Mogadishu. The two officials discussed bilateral relations and ways to...
A delegation from the African Union Peace Support Operations Division (PSOD) is in Somalia to assess peacekeeping activities as the transfer of responsibilities from AMISOM to Somali national security forces begin to take shape. During its four-day stay in Somalia, the 10-man...
Mjournal :-Xubno ka socda waaxda nabad gelyada ee Midowga Afrika ayaa booqasho ku jooga Soomaaliya, iyagoo u kuurgalaya xaaladda ammaan ee Dalka iyo heerka uu gaarsiisan yahay gudashada waajibaadka xoogagga nada ilaalinta AMISOM iyo Millitiriga Soomaaliya. Wafdigan oo ka kooban...
Mjournal :-C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah Siyaasiyiinta Mucaaradka, kana tirsan Xisbiga Wadajir ayaa sheegay in Madaxtooyada Soomaaliya ay maamulaan shaqsiyaad kale, isagoo ugu baaqay Madaxweynaha in aanu awoodiisa ku wareejin dad aan la dooran. Wareysi uu siiyaya...
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa xalay Madaafiic ku garaacay degaanka Ceel-raam oo ku yaalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka kenya. Saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Kenya ayaa warbaahinta u xaqiiijiyay in ay jirto Madaafiicda lagu garaacay degaanka, waxaana ay ka gaabsadeen in...
Mjournal :-Agaasimaha Waaxda Xiriirka Gobolada ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga C/llaahi C/kariin Maxamed Xiirey ayaa xalay lagu dhaawacay agagaarka nawaaxiga Beerta Nabadda ee degmada Waabari. Wararka ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan Ilaalada Madaxtooyada ay rasaas ku...
Tottenham Hotspur Iyo Juvetus oo barbaro ku kala baxay kulan Higuain uu rigoore ka qasaariyay kooxdiisa
Juventus iyo Tottenham Hotspur ayaa isku garab dhacay kulan xiiso lahaa oo ka dhacay magaalada Turin iyadoo kooxda martida aheyd ay si fiican uga falcelisay goolashii looga hormaray. Afar gool oo ay kala dhaliyeen Gonzalo Higuain, Christian Eriksen iyo Harry Kane ayaa kulankii...
Maamulka Koonfur Galbeed oo abaabul dagaal wada
Mjournal :-Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabay qaybo ka mid ah Gobolada Baay iyo Bakool. Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed oo booqday Ciidamada dhaqdhaqaaqa wadda ayaa ugu baaqay in ay xoojiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Wasiirka...